Ijaarsi siyaasa misoomawaa walakkeessa bara karoorichaatti haa qoratamu
Karoorri Guddinaafi Tiraanisformeeshinii lammaffaan waggaa shaniif hojiirra oolaa jiru eddii ragga'ee hojiitti seenamee waggaa sadaffaa keessa kan jiru yoo ta'u, walakkeessarra taa'anii sadarkaa inni irra jiru qorachuun malchiisaa ta'a.
Waggoota darbanitti bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf naannawawwan biyyattii maratti hojiileen hawaasa haala gurmaa'een sochoosuu danda'an raawwatamaniiru. Kanaanis keessumaa naannawa baadiyyaatti bu'aalee gaariin galmaa'aniiru. Ta'us sadarkaan akka waliigalaatti irra gahame oggaa qoratamu ammas hojii cimaa raawwachuufi bulchiinsa gaarii caalaatti dhugoomsuu akka barbaachisu kan agarsiisuudha.
Baadiyyaatti dinagdeen siyaasaa misoomawaan gararrummaa akka qabaatuufi tiraanisformeeshinii qonnaafi baadiyyaa argamsiisuuf tattaaffii cimaan akka barbaachisu, sassaabdummaan kiraa magaalotatti hidda cimsate laamshessuun ilaalcha misoomummaa caalaatti gabbisuun akka barbaachisuudha kallattiin kaa'ame kan agarsiisu.
Haala kanaan oggansi siyaasaafi hojjetaan mootummaa ummata wajjin bifa gurmaa'een socho'uun bulchiinsa gaarii dhugoomsuufi hojiilee riifoormii eegalaman milkeessuudhaan gararrummaan siyaasa misoomawaa akka mirkanaa'u gochuun karoora ijoo bara tiraansiformeeshiniifi misoomaati.
Gama oggansa siyaasaafi siviil sarvisii misoomawaafi bu'aa qabeessa ijaaruutiinis misooma waaraatiif akkasumas imala haaromsichaatiif balaawwan ijoon malaammaltummaafi sassaabdummaa kiraa ta'uun karooricha keessatti eerameera. Balaawwan kanneen dhabamsiisuufi injifannoodhaan keessa darbuuf, mootummaa misoomawaafi dimokraatawaa caalaatti cimsuuf dinagdee toora misoomawaatiin hogganuu akka barbaachisu kallattin kaa'ameera.
Kanaafis imaammawwaniifi sagantaalee mootummaa caalaatti raawwachiisuufi tajaajilawwan gahumsaan lammiilee biraan gahuuf ergama guddaa kan fudhatan hoggansi siyaasa misoomawaafi siviil sarvisiin, humna namaa sadarkaalee bulchiinsaa maratti haala ittifufiinsa qabuun jabeessanii ga'oomsuun hojii ijoo ta'uu akka qaba.
Kana gochuudhaanis hoggansa siyaasaafi siviil sarvisii bu'aa hojiirratti argamsiiseen madaalamaa iddoo maluuf qabatee gumaachasaa akka arjoomuuf haalli akka mijaa'u eerameera.
Dhaabbileen hundi hojmaataafi gurmaa'inasaaniitiin jijjiirama adeemsa hojii bu'uuraa guutummaatti kan hordofaniifi kenniinsi tajaajilaasaanii tajaajilamtoota kan quufsu, saffisaafi ergamasaanii haala bu'a qabeessa ta'een raawwachuu akka danda'aniif hordoffiifi deggarsi barbaachisaan akka taasifamus karooricharra jira. Haaluma kanaan bara xumuraa karoorichaatti sadarkaa ittiquufiinsaafi amantaa ummataa harka 60 irraa ture gara 85tti guddisuuf qabameera.
Bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf meeshaa ijoo kan ta'e ifummaafi sirna gaafatamummaa dhaabbilee mootummaa hundatti diriirsuuf xiyyeeffannaan hojjechuuf karooraan qabameera. Sagantaalee riifoormii hundi sadarkaalee bulchiinsaa maratti haala guutuu ta'een hojiirra akka oolaniif tattaaffiin akka taasifamuudha kan yaadame.
Hojiileen riiformii Karoora Guddinaafi Tiraanisformeeshinii jalqabaa keessatti sassaabdummaa kiraafi malaammaltummaa maddarraa gogsuuf bulchiinsa lafaa, taaksii, faayinaansiifi bittaa meeshaalee mootummaa akkasumas sirna dorgommii daldalaa eegalame cimsuufi milkeessuudha.
Sirna bulchiinsa haqaa bu'aa qabeessaafi kan malaammaltummaafi loogiirraa qulqullaa'e gochuufis akka hojjetamu kallattiin kaa'amee ture. Gama kanaan ragaalee dhugaqabeeyyii argachuuf, bu'a qabeessummaa haqaa jabeessuu, seerota fooyyessuu, raawwiifi haalli hiikamasaanii heera wajjin wal unachuusaa mirkaneessuuf, sirna abbaa seerummaafi bilisummaa manneen murtii, ifummaafi gaafatamummaa mirkaneessuu, muuxannoon waliti bu'iinsonni karaa nagaatiin ittiin hiikaman akka gabbatu gochuun hojiilee baroota karooraa keessa jirru kanatti raawwataman jedhamanii qabamaniidha.
Ija karoora kanaatiin waggoota lamaan darbanitti waantonnin jajalqabaman garanaa garasii yoo mul'atanillee sadarkaa irra gahuu qabanirra qaqqabamaniiru jechuun taasumaa kan yaadamu miti.
Qabiyyeen karoorichaa oggaa ilaalamu akka karooraatti dhimmoota biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'an hedduu qabateera. Bilchina kan qabuufi egeree biyyattiis kan murteessuufi agarsiisuudha.
Garuu gama hojiirra oolmaasaatiin keessumaa haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuufi barbaaddu wajjin oggaa madaalamu hojichi nuusnisaatuu waan raawwatame hinfakkaatu. Kanaaf walakkeessa baroota karoorichaarra teenyee hojii raawwatameefi hafe duraa duubatti mil'achuun daran malchiisaadha.
Torban kana/This_Week 17540
Guyyaa mara/All_Days 1442320